मेगा बैंकले खराब कर्जा लुकाउन यस्ताे बेइमानी गर्याे | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मेगा बैंकले खराब कर्जा लुकाउन यस्ताे बेइमानी गर्याे
माघ ३ गते, २०७६ - ०७:२५
काठमाडौं । मेगा बैंकले खराब कर्जा लुकाउन कालोसूचीमा रहेका र चेक बाउन्स मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पटक–पटक ‘ओभर ड्राफ्ट’ दिएर ऋण नवीकरण गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, बैंकले दुई पक्षबीच एकार्काको ऋण सकार्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा मिलेमतोमा अर्को ऋणीको जग्गा धितोमा ऋण निकासा गरी जालसाजी गरेको खुलेको छ।
आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – म्हैपीस्थित एक उद्यमी मेगाकै कारण साढे १९ आना जग्गा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। उनको जग्गा मेगाले लिलामी गर्दै छ। ऋण नतिरेर होइन, मेगाको जालसाजीका कारण।
उत्तम कुमारले सञ्चालन गरेको ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयर उद्योग तथा यसको नाममा रहेको म्हैपीको २० आना जग्गा र ८ करोड रुपैयाँ मेगाको ऋण भुमादेवी गौतमले २०७४ मंसिर २९ मा सट्टापट्टा गर्ने सम्झौता भयो। त्यसअनुसार सामाखुसीको साढे चार आना जग्गा र प्रभु बैंकमा भुमादेवीका नाममा रहेको १ करोड २१ लाख ऋण उत्तम कुमारले सकार्ने लिखित सम्झौता थियो।
उत्तम कुमारले सम्झौताको एक सातामै भुमादेवीका नाममा जग्गा, उद्योग र ऋण हस्तान्तरण गरे। जसको रोहबरमा थियो मेगा। किनकि, उत्तम कुमार मेगाका ऋणी थिए। उनले उद्योग र जग्गा दिएर ठूलो ऋणको बोझ बिसाउन चाहेका थिए। प्रभुमा रहेको भुमादेवीको ऋण तिर्न उत्तम कुमारका नाममा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मेगाबाट ऋण स्वीकृत भयो। दुवै जना मेगाका ग्राहक भए, बैंकलाई ऋण सकार्ने सम्बन्धमा जानकारी गराए। तर, यही बीचमा उत्तम कुमारलाई दिने भनिएको सामाखुसीको जग्गा धितोमा बैंकले बदमासी गरी कर्जा थपिदियो।
उत्तम कुमारले आफ्नो उद्योग, म्हैपीको साढे १९ आना जग्गा र मेगाको ८ करोड ऋण भुमादेवीका नाममा सारे। मेगाले उक्त जग्गा र कारोबार सट्टापट्टाबारे जानकारी हुँदाहुँदै भुमादेवीको सामाखुसीकै जग्गा धितोमै थप ऋण दियो। मेगाले जालसाजी गरी भुमादेवीको घरजग्गा धितोमा ऋण थपिदिएकाले उक्त सम्पत्ति उत्तम कुमारका नाममा भने हस्तान्तरण भएन।
मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा मेगाले उक्त जग्गामा भुमादेवीलाई थपेर ३ करोड ४० लाख ऋण दिएको देखियो। त्यसपछि उत्तम कुमार प्रहरीको अपराध महाशाखा टेकु पुगे। बैंक र भुमादेवीबीचको मिलेमतो देखिएपछि प्रहरीले गत जेठ २९ मा ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर ग¥यो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयरको म्हैपीको ८२ र २ नम्बर कित्ता अनि सामाखुसीको २३२ नम्बर कित्तामा कति–कति ऋण छ, खुलाई पठाइदिनू भनेर सोधेकामा झन्डै ८ करोड ऋण दिएको देखियो।
अदालतको स्वीकृति लिएर प्रहरीले भुमादेवीलाई असार ८ मा पक्राउ गरी थुनामा राख्यो। उनी थुनामा रहँदै असार १८ मा थप ८५ लाख रुपैयाँ ओभर ड्राफ्ट दिएर थप कर्जा नवीकरण ग¥यो। यसलाई वित्तीय क्षेत्रको भाषामा ‘लोन इभरग्रिनिङ’ भनिन्छ। बैंकले यस्ता व्यक्तिलाई ऋण दियो, भुमादेवी र उनका श्रीमान् गुरुदत्त पौडेल जेठ २९ मै कालोसूचीमा परेका थिए। कालोसूचीमा परेपछि एकाघर परिवारका नाममा ऋण दिन र नवीकरण गर्न पाइँदैन। असार १९ मा एकै दिन उक्त ऋणीको खाताबाट ८५ लाख रुपैयाँ झिकेको पाइयो।
उक्त ओभर ड्राफ्ट दिएर बैंकले कर्जाको ब्याज तिराएको थियो। ब्याज नियमित नभएको भए बैंकले ऋणको प्रोभिजनिङ(जोखिम व्यवस्थाबापत निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था) गर्नुपथ्र्यो। यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्थ्यो र नाफा कम हुन्थ्यो।
यस सम्बन्धमा उजुरी परे पनि राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिएको छ। कानुनतः कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले आफूले इजाजत दिएका वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिन बन्देज लगाएको छ। यस सम्बन्धमा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० अनुपमा खुञ्जेलीले ऋणको प्रोभिजनिङ गराउनुपर्ने अवस्थामा बाध्य भएर ओभर ड्राफ्ट दिनुपरेको बताएकी छन्। ‘उनीहरूको विवाद सल्टियोस् भनेर बैंकले प्रयास गरिरहेको छ’, उनले भनिन्।
मेगाको मिलेमतो कहाँ–कहाँ ?
मेगाले २०७५ पुस ३० मा ब्याज लिनका लागि भुमादेवीलाई ऋण दियो। माघ २२ मा फेरि ३५ दिने कर्जा चुक्ता सूचना निकाल्यो। त्यसपछि फेरि चैत ६ गते अर्को सूचना निकाल्यो। फेरि २०७६ असार १८ मा कालोसूची र थुनामा हुँदाहुँदै ओभर ड्राफ्ट कर्जा र सम्पूर्ण कर्जाको नवीकरण गरियो। भोलिपल्टै पैसा झिक्न दिइयो। त्यसपछि भदौ १६ मा म्हैपीको जग्गा लिलामीका लागि सूचना निकाल्यो।
उत्तमले जग्गा लिलामी रोक्काका लागि आफूमाथि ठगीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निशेधाज्ञा माग गरे। अदालतले बैंकलाई सोध्दा उत्तम कुमारको बारेमा कुनै अधिकार छैन, उनी खराब ऋणी हुन् भनियो। तर, बैंकले उत्तम कुमारलाई राम्रो ऋणी हो भनेर पत्र उपलब्ध गराएको थियो। मेगासँग कुनै दायित्व नरहेका उत्तम कुमारको सम्बन्धमा अदालतलाई पनि गुमराहमा राखेको देखियो। उत्तम कुमारले बैंकलाई ऋणको किस्ता नियमित नबुझाएको भए उनको ऋण सकार्ने अर्को व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण हुने थिएन।
को हुन् भुमादेवी र गुरुदत्त पौडेल ?
कैलाश विकास बैंकबाट ऋण लिएर धापासीको घर लिलाम गराएका पौडेलकै जग्गा आईएमई कोअपरेटिभ सर्भिसले नवलपरासी कावासोतीको जग्गा पनि लिलाम गरेको थियो। मेगामा ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकै बेला हेटांैडाको जग्गाधनीलाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो। उनले चेक बाउन्स मुद्दा खेपिरहेका छन्। भुमादेवी गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसकेका कारण जेलमा छिन्।
माघ ३ गते, २०७६ - ०७:२५ मा प्रकाशित
छाङरू र टिंकरका बासिन्दालाई सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो दार्चुला।...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले...
संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी (केन्द्र) को जिम्मा बागमती प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि काठमाडौं...
धनगढी । दसैं-तिहार नजिकिँदै छन्, तर रोजगारी खोज्न सीमा पार गर्नेको संख्या झनझन् बढ्दै छ । आजको नयाँ...
काठमाडौं । कलिला नानीहरूको घाँटी निमोठ्ने मानव सभ्यता विपरीतका घटनालाई विद्यमान कानुनले थेग्न नसकेपछि...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने निणर्य यथावत्...
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न अनावश्यक भीडभाड नगर्न र भौतिक दूरी कायम राख्न अपिल गरिरहेको...
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपामा भागबन्डाका लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाइने भएको छ । तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर...
काठमाडौं। सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य...